Project management - Ningbo Euro akpụzi & Plastic Co., Ltd
Ekwentị: 0086 574 65325867
Ebu Flow Analysis
Ebu rụpụta & mgbanwe
Plastic akụkụ rụpụta
Prototype akụkụ rụpụta
Final ebu checklist
Ebu imewe checklist
Ebu ikpe checklist
N'èzí ngwá ụlọ ebu
rattan sofa & oche ebu
rattan stool ebu
rattan table ebu
Umbrella isi ebu
ahịhịa njide ebu
broom cover ebu
cutlery tree ebu
chocolate igbe ebu
ájá biini ebu
na-asa ákwà nkata ebu
plastic planter ebu
nchekwa igbe ebu
mmiri anwụrụ ebu
nkwụsị igbe ebu
agba ala ebu
ịchọ mma okpu ebu
tụgharịa n'elu okpu ebu
mmanụ okpu ebu
nche mgbanaka okpu ebu
unscrewing okpu ebu
ịfụ ebu na deflasher
ịchọ mma karama igbu ebu
drum igbu ebu
jerrycan igbu ebu
ihe ọṅụṅụ karama ebu
mmiri ara ehi karama ebu
rotary igwe igbu ebu
Thin mgbidi ebu
ice ude cup ebu
mkpa mgbidi nri tub ebu
nnukwu slide ebu
ụmụaka 'ụlọ egwuregwu ebu
ọduọ ụgbọ ala ebu
ọgba tum tum ebu
eriri mkpuchi ebu
obere slide ebu
Ọdụdọ ngwa oru ebu
ikuku conditioner ebu
friji drawer ebu
saa igwe ebu
mmanụ tank ebu
Program oru site Euro akpụzi na-akwanyere ùgwù na ihe ọmụma ha na ebu imewe, n'ichepụta, engineering, ịkpụzi, onye na-akọwa ọrụ akporo, oge onye ọ bụla nzọụkwụ na ịnọgide na-enwe ụkpụrụ maka ihe ọ bụla plastic ebu oru ngo ga-arụzu site anyị ụlọ ọrụ.
Mgbe ha nyochasịrị ngo data, anyị usoro oru ga-arụ ọrụ a n'ichepụta oge a ga-agbaso mgbe dum n'ichepụta usoro. Nke a na-enyere aka iji wuchaa ngo n'ụzọ dị irè na deadlines setịpụụrụ onye ọ bụla nzọụkwụ.
Iji belata nwere ihe ize ndụ gbochie njehie na ebu ụlọ, ọ bụla oru ngo na-emezu na ụfọdụ checklists enen tupu & site si ebu ụlọ na nke ikpeazụ ebu nnyefe. Otú ahịa pụrụ ịdabere na Euro akpụzi maka àgwà.
Ningbo Euro akpụzi & Plastic Co., Ltd